League of Legends ရဲ့ အကွီးမားဆုံးပွိုငျပှဲ World Final 2019 မှာ ဘယျသူအနိုငျရရှိခဲ့လဲ? – Gaming Noodle
နှဈစဉျကငျြးပမွဲဖွဈတဲ့ League of Legends ရဲ့ အကွီးမားဆုံးပွိုငျပှဲ World Championship ပှဲစဉျမြားကို ယခုနှဈမှာလညျး မကွာသေးမီက ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ World Championship 2019 ကို အနိုငျရရှိသှားတာကတော့ တရုတျအသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ FunPlus Phoenix (FPX) ပါ။ FPX ဟာ ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာ ပွိုငျဘကျအသငျး G2 Esports ကို ၃ ပှဲပွတျ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး Summoner’s Cup ဆုဖလားကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
FPX နဲ့ G2 Esports တို့ ၂ သငျးလုံးဟာ အလှနျကောငျးမှနျတဲ့အသငျးမြားဖွဈကွတဲ့အတှကျ သူတို့ရဲ့ ယှဉျပွိုငျမှုဟာ ပှဲကွီးပှဲကောငျးမြားဖွဈကွလိမျ့မယျလို့ အမြားက ခနျ့မှနျးထားကွတာပါ။ တကယျတမျးယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ရမှာတော့ FPX ဟာ G2 Esports ကို အသငျးလိုကျပူးပေါငျးလုပျဆောငျနိုငျစှမျးမှာရော တဈဦးခငျြးစီအရညျအခငျြးမြားမှာပါ သာလှနျနခေဲ့လို့ ပှဲအနိုငျအရှုံးအဖွမြေားဟာ ခဏခငျြး သိသာသှားခဲ့ရပါတယျ။
FPX အသငျးရဲ့ jungler ကစားသမားဖွဈသူ Tian ဟာ ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာ KDA 5.1 အထိ ရရှိခဲ့သလို ကောငျးမှနျလှတဲ့ gank မြား၊ သာလှနျတဲ့ pick မြား ပွုလုပျနိုငျခဲ့လို့ MVP award ဆုကို ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ Tian ဟာ G2 Esports အသငျးရဲ့ jungler ဖွဈသူ Jankos ထကျ သာလှနျတဲ့ ကစားကှကျမြားနဲ့ အသငျးကို အနိုငျရရှိအောငျ ချေါဆောငျသှားနိုငျခဲ့သူတဈဦးပါ။
FPX အသငျးရဲ့ support ကစားသမား Crisp ဟာ အသငျးရဲ့ကစားသမားမြားကို ကူညီဖို့ ကောငျးစှာ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့သလို mid laner ကစားသမား Doinb ဟာလညျး Nautilus နဲ့ Galio တို့လို ခနျြပီယံမြားကို ကိုငျတှယျကစားပွီး တဈဖကျအသငျးကို ဖိအားပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ FPX ရဲ့ ADC ကစားသမား Lwx ဆိုရငျ Worlds Finals မှာ death လုံးဝမရှိတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖွဈတောငျ စံခြိနျတငျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
တဈခြိနျတညျးမှာပဲ G2 အသငျးရဲ့ ကစားကှကျမြားကို ပရိသတျမြား အားမလို အားမရဖွဈခဲ့ကွရပါတယျ။ FPX ရဲ့ အသာစီးယူ ကစားမှုကို ခံခဲ့ရသလို G2 ရဲ့ ခနျြပီယံ pick မြားနဲ့ ကစားပုံမြားဟာလညျး ဂိမျးရဲ့ အစောပိုငျးမှာ အဖိနှိပျခံရလှယျနခေဲ့ပါတယျ။ ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမတိုငျမီက G2 ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ကစားကှကျမြားနဲ့ တကျရောကျလာနိုငျခဲ့ပမေယျ့ FPX နဲ့ တှဆေုံ့ရာမှာတော့ မွပေုံတဈလြှောကျ ဖိအားမြားစှာပေးခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။
FPX ဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး League of Legends အသငျးမြားထဲက တဈသငျးဖွဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Doinb ဆိုရငျ FPX ကို မဝငျရောကျခငျ အရငျနှဈက ကစားသမားအဖွဈက အနားယူဖို့တောငျ စဉျးစားမိခဲ့ပမေယျ့ ယခုအခြိနျမှာတော့ ခနျြပီယံတဈဦးအဖွဈကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပါပွီ။ တဈကမ်ဘာလုံးက League of Legends ကစားသမားမြားဟာလညျး ခနျြပီယံသဈမြား ပျေါထှကျလာတဲ့အတှကျ ဝမျးမွောကျဝမျးသာဖွဈနကွေပါတယျ။
2019 LOL World Finals
၂၀၂၀ ခုနှဈအတှကျ World Championship ပှဲစဉျမြားကိုတော့ ရှနျဟိုငျးမွို့မှာ ကငျြးပမှာပါ။ League of Legends ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ ကစားသူအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ MOBA ဂိမျးတဈခုဖွဈသလို လာမယျ့နှဈမှာ မိုဘိုငျးလျဗားရှငျးကို ထုတျလုပျမယျလို့ ကွညောထားတဲ့အတှကျ gamer အမြားရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို အထူးတလညျခံနရေတဲ့ ဂိမျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Final 2019 မှာ ဘယ်သူအနိုင်ရရှိခဲ့လဲ?
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Championship ပွဲစဉ်များကို ယခုနှစ်မှာလည်း မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ World Championship 2019 ကို အနိုင်ရရှိသွားတာကတော့ တရုတ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ FunPlus Phoenix (FPX) ပါ။ FPX ဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်း G2 Esports ကို ၃ ပွဲပြတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး Summoner’s Cup ဆုဖလားကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
FPX နဲ့ G2 Esports တို့ ၂ သင်းလုံးဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းများဖြစ်ကြတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုဟာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းများဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ အများက ခန့်မှန်းထားကြတာပါ။ တကယ်တမ်းယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့ FPX ဟာ G2 Esports ကို အသင်းလိုက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှာရော တစ်ဦးချင်းစီအရည်အချင်းများမှာပါ သာလွန်နေခဲ့လို့ ပွဲအနိုင်အရှုံးအဖြေများဟာ ခဏချင်း သိသာသွားခဲ့ရပါတယ်။
FPX အသင်းရဲ့ jungler ကစားသမားဖြစ်သူ Tian ဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ KDA 5.1 အထိ ရရှိခဲ့သလို ကောင်းမွန်လှတဲ့ gank များ၊ သာလွန်တဲ့ pick များ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ MVP award ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Tian ဟာ G2 Esports အသင်းရဲ့ jungler ဖြစ်သူ Jankos ထက် သာလွန်တဲ့ ကစားကွက်များနဲ့ အသင်းကို အနိုင်ရရှိအောင် ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။
FPX အသင်းရဲ့ support ကစားသမား Crisp ဟာ အသင်းရဲ့ကစားသမားများကို ကူညီဖို့ ကောင်းစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလို mid laner ကစားသမား Doinb ဟာလည်း Nautilus နဲ့ Galio တို့လို ချန်ပီယံများကို ကိုင်တွယ်ကစားပြီး တစ်ဖက်အသင်းကို ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ FPX ရဲ့ ADC ကစားသမား Lwx ဆိုရင် Worlds Finals မှာ death လုံးဝမရှိတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖြစ်တောင် စံချိန်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ G2 အသင်းရဲ့ ကစားကွက်များကို ပရိသတ်များ အားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ FPX ရဲ့ အသာစီးယူ ကစားမှုကို ခံခဲ့ရသလို G2 ရဲ့ ချန်ပီယံ pick များနဲ့ ကစားပုံများဟာလည်း ဂိမ်းရဲ့ အစောပိုင်းမှာ အဖိနှိပ်ခံရလွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမတိုင်မီက G2 ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ကစားကွက်များနဲ့ တက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် FPX နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာတော့ မြေပုံတစ်လျှောက် ဖိအားများစွာပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
FPX ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး League of Legends အသင်းများထဲက တစ်သင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Doinb ဆိုရင် FPX ကို မဝင်ရောက်ခင် အရင်နှစ်က ကစားသမားအဖြစ်က အနားယူဖို့တောင် စဉ်းစားမိခဲ့ပေမယ့် ယခုအချိန်မှာတော့ ချန်ပီယံတစ်ဦးအဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက League of Legends ကစားသမားများဟာလည်း ချန်ပီယံသစ်များ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် World Championship ပွဲစဉ်များကိုတော့ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ ကျင်းပမှာပါ။ League of Legends ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကစားသူအများဆုံးရရှိထားတဲ့ MOBA ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သလို လာမယ့်နှစ်မှာ မိုဘိုင်းလ်ဗားရှင်းကို ထုတ်လုပ်မယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် gamer အများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အထူးတလည်ခံနေရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။